Sida loo rakibo Android Lollipop-ka Samsung Galaxy S4 | Androidsis
Francisco Ruiz | | ROM, Samsung, Noocyada Android
Kuwii hore waa dhow yihiin Android 5.0 Lollipop Roms habeenkii aalado badan oo Cyanogenmod uu ku soo daray liiskeeda dheer ee boosteejooyinka ee ay taageeri doonaan bulshada weyn ee horumariyayaasha Android heer sare. Si aad u badan, in aad horeyba u urin kartid Roms-kii ugu horeeyay ee gobolka Alpha, wali waa haddii, sida kan aan hoosta ka faaloon doono Samsung Galaxy S4 GT-I9505 model caalami ah oo leh processor Snapdragon.
Marka ugu horeysa waa inaan kuu sheego in Romankaani ay wali ku jiraan xaalad loo arko inay tahay Alfa, taas oo macnaheedu yahay kuma ansaxsana isticmaalka maalin kasta, haddaanay ahayn toosh iyaga oo tijaabi in yar si aad dharkaaga uga boodo oo aad u ogaato tanyada Samsung Galaxy S4 oo rogaysa Android Lollipop si rasmi ah.
Haddii aad xiiseyneyso inaad si toos ah ugu tijaabiso adiga Samsung Galaxy S4 Gt-I9505Marka xigta, waxaan kuu sharxi doonaa waxa aan xilligan shaqeynin, in ka badan wax kasta si markaa laguu digo, marka lagu daro inaan kuu sharxo tallaabo tallaabo ah habka loo iftiiminayo Romka si aad ugu raaxeysato Samsung Galaxy S4 oo rogaysa Android Lollipop oo waxaad dareemi kartaa khibrada noocaan cusub ee Android ee jirkaaga ah.
Kahor intaadan bilaabin dhalaalka tan Marka hore Android 5.0 Lollipop Rom ee Samsung Galaxy S4, Waxaan kugula talinayaa taas marka hore tan Dib u soo kabashada wax laga beddelay samee dib u dhigid nadroid dhammaan nidaamkaaga hadda jira, sidaas darteed, haddii aad rabto inaad ku noqoto noocaaga hadda jira, waxaad ku gaari doontaa si aad u fudud, adigoo xafidaya dhammaan codsiyadaada iyo xogtaada.
1 Waxyaabaha aan wali shaqeynin
2 Habka rakibidda Android Lollipop ee qaabka caalamiga ah ee Samsung Galaxy S4
Waxyaabaha aan wali shaqeynin
Dhibaato kale oo la xiriirta soo dhaweynta wicitaanada, inkasta oo sida muuqata cusboonaysiintii ugu dambaysay, tii 20-kii, waa la xallin lahaa.
Mabda 'ahaan kuwani waa cayayaanka ama guuldarada ay soo sheegaan dadka isticmaala XDA, inkasta oo la siiyay xaaladdeeda Alpha, qaar kale ayaa la soo bandhigi karaa.
Habka rakibidda Android Lollipop ee qaabka caalamiga ah ee Samsung Galaxy S4
Si aad u awoodo inaad ku tijaabiso kuweenna Samsung Galaxy S4 moodal caalami ah tan ugu horreysa Rom Android Lollipop, macquul ahaan waa inaan yeelannaa terminal hore u xididaysan iyo la soo kabashada la beddelay rakibay oo la cusbooneysiiyay qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
Faylasha loo baahan yahay in lagu rakibo Romka waxay ku kooban yihiin laba fayl, tan Rom lafteeda oo aan ka soo dejisan karno isla xiriiriyahan, iyo tan codsiyada hooyo ee Google ama Gapps in aan halkan ka soo dejisan karno.
Markaad soo dejiso Waan nuqulaynaa iyaga oo aan hoos u dhigin xusuusta gudaha ee Samsung Galaxy S4 in aan rabno in aan shidno.
Marka shuruudahaan la buuxiyo, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa reboot hab dib u soo kabasho oo raac talaabooyinkan fudud:
Ku rakib sinka kaararka gudaha
Waxaan ka soo xulnaa Rom zip elo oo aan ka xaqiijineynaa rakibiddiisa
Dooro zip markale
Waxaan doorannaa zipka gapps-ka waxaanan xaqiijinaynaa rakibiddiisa
Nidaamka reboot hadda.
Tan waxaan ku awoodnaa tijaabi Samsung Galaxy S4 Android 5.0 Lollipop oo aad aragto dhammaan wanaagga iyo cusboonaysiinta in nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Mountain View uu la imanayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sidee si aan rasmi aheyn loogu rakibaa Android Lollipop-ka Samsung Galaxy S4
Dooxada Taallada: Xeebaha la iloobay ee laga heli karo Amazon Appstore
Difaaca munaaraddii ugu fiicneyd wuxuu la soo noqdaa Boqortooyada Rush: Asal ahaan